February 2019 – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
၀ဇီရဗုဒ္ဓိ ဦးဖိုးစိန် ရေးပါတယ်။
မြန်မာဘာသာတွင်လည်း အသံ၌လည်းကောင်း၊ အရေး၌လည်းကောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ချက်များ ရှိကုန်သည်။ ရှိပုံကား
(၁) နွား ၃ ကောင်၊ ၄ ကောင်၊ ၅ ကောင်တို့ကို ပေါင်းသော် ဗောင်းမည်မျှနည်း။
(၂) နွား ၃ ကောင်၊ ၄ ကောင်၊ ၅ ကောင်တို့ကို ပေါင်းသော် အပေါင်းမည်မျှနည်း။
(၃) အပေါင်း အနုတ် တတ်ကဲ့လား။
ဟူရာတို့တွင် (၁) ၌ “ဗောင်း” ဟူသောအသံကို ပေါင်း၍ ရသောအရာကို ဟောသည်။ ပေါင်းသော်ကား အဟော ကြိယာငယ်၊ ဗောင်းကား နာမ်ဖြစ်ကုန်၏။ ပေါင်းဟူသော ကြိယာကို ကြိယာအနက်မထင်စေပဲ နာမ်အနက်၊ ဒြပ်အနက် ထင်စေရန် အ ဃောသ အက္ခရာ၊ ပစောက်သံကို ဃောသ အက္ခရာ ဗထက်ခြိုက်သံသို့ ပြောင်း၍ရွတ်ဆိုသည်။ ထိုသို့ ရွတ်ဆိုသည်နှင့်အညီ ဗထက်ခြိုက်နှင့်ပင် ရေးမှတ်ကြသည်။ ရေးမှတ်သင့်သည်။ နံပါတ် (၂) စကားသည် နံပါတ် (၁) စကားနှင့် အနက်အဓိပ္ပာယ် ထပ်တူပင်ဖြစ်သည်။ ပေါင်းဟူသော ကြိယာကို နာမ်အနက်ထင်စေလိုရာ ဗောင်းဟု အသံမပြောင်းစေပဲ ရှေ့က “အ” ကိုထည့်၍ “အပေါင်း” ဟုဆိုသည်။ ဗောင်းနှင့်အပေါင်းကား အနက်တူကြသည်။ နံပါတ် (၃) ၌ အပေါင်းသဒ္ဒါကား ၀တ္ထုဒြပ်ကိုမဟော၊ ပေါင်းနည်းဟူသော အမူအရာမျှကို ဟောသည်။ ထို့ကြောင့် လုံးထီးကြိယာရှေ့က “အ” ထည့်သွင်း၍ဆိုသော သဒ္ဒါကား ဒြပ်အနက်၊ အမူအရာမျှ အနက်ကို ဟောစွမ်းသည်။ ဗောင်းမှာကဲ့သို့ မူလကြိယာသံ လုံးလုံးပျက်အောင် ပြောင်းသောသဒ္ဒါကား အမူအရာအနက်ကို မထင်စေနိုင်ပြီ။ နာမ်အနက်၊ ဒြပ်အနက်ကိုသာ ဟောတော့၏။ အခြားပြယုဂ်များကား
(၁) ပန်းပင်ကို လူမဆွတ်စေနှင့်၊ ဂိုင်းညွတ်တတ်တယ်။
(၂) ပန်းပင်ကို လူမဆွတ်စေနှင့်၊ အကိုင်း ညွတ်တတ်တယ်။
နံပါတ် (၁) ၊ (၂) တို့မှာ အနက်အဓိပ္ပာယ်တူ ဖြစ်ကုန်သည်။ ဂိုင်းနှင့် အကိုင်းတို့လည်း အနက်တူ ဖြစ်ကုန်သည်။ ကိုင်းကြိယာကို ဒြပ်အနက်ထပ်စေအောင် ဃကြီး၏ ဃောသသံ ဖြစ်သော ဂငယ်သံသို့ပြောင်း၍ “ဂိုင်း” ဟု ရွတ်ဆိုသည်။
ယင်းဒြပ်အနက်ဟော “ဂိုင်း” သဒ္ဒါကို ဂ ငယ်နှင့်ပင် ရေးကြသည်။ ရေးလည်းရေးသင့်သည်။
(၁) ထိုဆရာတော်၏ဘွဲ့ကား အဘယ်မည်သနည်း။
(၂) လေးလေးတွဲ့တွဲ့၊ လက်တော်ဖွဲ့၊ ရွှေဘွဲ့ထိပ်မှာချည် (က၀ိလက္ခဏာ)
မောင်သြသည် အလောင်းမင်းတရားကြီးထံ အမှုတော်ထမ်းရာ “စိန္တကျော်သူ” ဟူသောဘွဲ့ကို အသနားခံရသည်ဟူရာ၌ မောင်သြကား ငယ်မည်၊ စိန္တကျော်သူကား မောင်သြ၏ ဂုဏ်ရည်နှင့် လိုက်အောင် ပေးဖွဲ့သော ဘွဲ့အမည်၊ ယင်းဂုဏ်ရည်၏ အမည်မျိုးကို အဘယ်ကြောင့်ဘွဲ့ဟု ခေါ်သနည်း။ မြန်မာမင်းလက်ထက် စိန္တကျော်သူ၊ ရွှေတောင်ရာဇကျော်စသောအမည်မျိုး ရေးပါသော ရွှေပြားကို နဖူးထိပ်မှာ ဖွဲ့ချည်ရသည်။ ဗောင်းရသော အမတ်ဖြစ်လျှင် ထိုရွှေပြားအထက်၌ ဗောင်းကိုဆောင်းသည်။ ရှင်ဘုရင်မှာလည်း ထိုနည်းတူပင် “နရပတိစည်သူ” စသောအမည်ရေးပါသည့်ရွှေပြားကို နဖူးထိပ်မှာ ဖွဲ့ချည်သည်။ ထို့အထက်၌ မကိုဋ်ဆောင်းသည်။ ထို့နောက် သင်းကျစ်ကို မကိုဋ်အနား၊ ရွှေပြားအနားတို့ကို ဖိ၍ သင်းကျစ်၍ ဖွဲ့ချည်သည်။
ဟူရာ၌ ဖွဲ့ဖြူ – ကား ခါး၌ဖွဲ့ဝတ်အပ်သော အဖြူရောင်ပုဆိုးကို ဟောသည်။ ထိုသို့သော ပ၀တ္တနိမိတ်ကို ထောက်ချင့်၍ ဘွဲ့ – သဒ္ဒါကား ဖွဲ့အပ်သောဝတ္တုဒြပ်ကို ဟောသည်ဟု မှတ်ရာ၏။ ပေါင်း – ဟူသောကြိယာကို ပေါင်း၍ရသော ၀တ္ထုအနက်ကို ထင်စေလိုရာ၌ “ဗောင်း” ဟူသော ဃောသသံသို့ ပြောင်းလဲရွတ်ဆိုသကဲ့သို့ ဖွဲ့- ဟူသောကြိယာကို ဖွဲ့အပ်သော ၀တ္ထုအနက်ကို ထင်စေလိုရာ၌ “ဘွဲ့” ဟု ဃောသသံသို့ ပြောင်းလဲရွတ်ဆိုသည်။ ရေးရာ၌လည်း ရွတ်သံနှင့်အညီ ဘွဲ့ဟု ဘကုန်းနှင့်ရေးမှတ်ကြသည်။ ရေးလည်းရေးသင့်သည်။
ဘွဲ့နှင့် ပတ်ပျိုး ဘယ်သို့ထူးခြားသနည်း။
ဟူရာ၌ ဘွဲ့ – သဒ္ဒါကား ဖွဲ့ဆိုစီကုံးရသော သီချင်းအနက်ကို ဟောသည်။ ထိုသို့လျှင် ဖွဲ့ဆိုသောအရာဝတ္တုအနက်ကို ထင်စေလိုရာ၌ ဖွဲ့ဟူသောကြိယာကို ဃောသသံသို့ပြောင်း၍ ဘွဲ့ဟုရွတ်ဆိုသည်။ ဘကုန်းနှင့်လည်း ရေးကြပေသည်။ ကောက်သောအရာဝတ္ထုကို ဂေါက်၊ ခုံးသောအရာဝတ္ထုကို ဃုံး၊ မတ်စောက်သောအရာကို ဇောက်၊ ကုန်ကိုဆေးရာ အရပ်ကို ဈေး၊ တိုင် ကြား အပ်သောသူကို ဒိုင်၊ ထောက်တတ်သောအရာကို ဓောတ်၊ အပိုင်းအပဲ့ဖြစ်သောအရာကို ဗဲ့၊ ဖိတတ်သောအရာကို ဘိ ဟူ၍ မူလကြိယာသံကို ဃောသသံသို့ပြောင်း၍ နာမ်အနက်၊ ဒြပ်အနက်ကို ဆိုတတ်သည်။ ထိုသို့ပြောင်းရာ၌ ဌာန်တူအက္ခရာချင်းတွင်လည်း အဃောသသိထိလကို ဃောသသိထိလနှင့် အဃောသဓနိတကို ဃောသဓနိတနှင့် ဤသို့ သိထိလကို သိထိလချင်း၊ ဓနိတကို ဓနိတချင်းသာ ပြောင်းရသည်။ ပုံကား
ပ . ဖ . ဗ . ဘ . မ
ကို ပ၀ဂ်၊ သြဌဌာန်ဟုခေါ်သည်။ ယင်းဝဂ်တွင် ပ ဖ ၂ လုံးကို အဃောသ (သံညံ့) အက္ခရာ၊ ဗ ဘ မ ၃ လုံးကို ဃောသ (သံထင်) အက္ခရာဟုခေါ်သည်။ အဃောသ ၂ လုံးတွင်လည်း ပ ကို သိထိလအက္ခရာ၊ ဖ ကို ဓနိတအက္ခရာဟုဆိုသည်။ ဃောသ ၃ လုံးတွင်လည်း ဗ ကို သိထိလအက္ခရာ၊ ဘ ကို ဓနိတအက္ခရာ၊ မ ကို နှာသိကအက္ခရာဟု ဆိုသည်။ ထို့ပြင် သိထိလ အဃောသ ဖြစ်သော ပ ၏ အသံကို ပြောင်းလိုလျှင် သိထိလ ဃောသ ဖြစ်သော ဗ သံသို့ပြောင်း၍ ရွတ်ဆိုရသည်။ ဓနိတ အဃောသ ဖြစ်သော ဖ ၏ အသံကို ပြောင်းလိုလျှင် ဓနိတ ဃောသဖြစ်သော ဘ သံသို့ ပြောင်းလဲရွတ်ဆိုရသည်။ ဤ ဥပဒေကို အထက်ပြယုဂ်နှင့် ဟပ်လဲကြည့်လေ။
မြန်မာဘာသာ၌ အသံပြောင်းလဲရခြင်း၏ အကြောင်းကား ၂ ပါးရှိသည်။
(၁) နာမ်အနက်၊ ဒြပ်အနက်ကို ထင်စေလိုသောကြောင့် အဃောသကြိယာသံကို ဃောသသံသို့ အထက် ဥပဒေနည်းအတိုင်း ပြောင်းလဲရွတ်ဆိုရသည်။ ပြယုဂ်ကား အထက်၌ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတည်း။
(၂) သန္ဓိစပ်ခြင်းအကြောင်းကြောင့် အဃောသအက္ခရာသံကို ဃောသအက္ခရာသံသို့ ပြောင်းလဲရွတ်ဆိုသည်။ ပုံကား – စားဘွယ်၊ သောက်ဖွယ်၊ တောက်ဘက်၊ မြောက်ဖက်
စသည်တို့တည်း။ ဖွယ်ရာသောဝတ္ထုကို အဖွယ်ဟုဆိုသည်။ ဂေါက်ဆိုမည့်အစား အကောက်၊ ဃုံးဆိုမည့်အစား အခုံး၊ ဇောက်ဆိုမည့်အစား အစောက်ဆိုဘိသကဲ့သို့တည်း။ စားဘွယ် ဟူသောသမာသ်၏ စပ်ရင်းပုဒ်များကား
ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ကောက်သောအရာကို အကောက် ဆိုဘိသကဲ့သို့ ဖွယ်သောအရာကို အဖွယ်ဆိုသဖြင့်
စားရန် + အဖွယ်
ဟုရ၏။ ယင်းတွင် “ရန်” နှင့် “အ” ကို ချေပြန်ရာ
စား + ဖွယ်
ဟု ၂ သံကြွင်းသည်။ ယင်း ၂ ပုဒ်ကို တစပ်တည်ရွတ်ဆိုရာ “စား” ၌ “အ –ား” ဟူသော ဃောသသံဆုံးလေသောကြောင့် နောက်ပုဒ်အစ ဖ ဗျည်း အဃောသ ဓနိတအက္ခရာသည် ဃောသ ဓနိတအက္ခရာ ဘကုန်းထံသို့ ပြောင်းသည်။
သောက်ရန် + အဖွယ် = သောက် + ဖွယ်
ဟူသောအစပ်တွင် ရှေ့ပုဒ် “သောက်” ၌ က်- ဟူသော အဃေသဗျည်းဆုံးသောက်၊ နောက်ပုဒ်အစ ဖ ဗည်း၊ အဃောသအက္ခရာသည် အသံမပြောင်း၊ ထို့ကြောင့် “သောက်ဖွယ်” ဟု ဖဦးထုပ်သံရွတ်ဆိုသည်။
ဟူရာ၌ ဖက်တွဲရသော အရာကို အဖက်ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ဘက်ဟူ၍လည်းကောင်း ဆိုသည်။ တောင်အရပ်၊ မြောက်အရပ်တို့သည် သမသတ်တတွဲဖြစ်လေသောကြောင့်
မြောက်ဟူသော + အဖက်
ဟူရာ၌ ဖက်တွဲရသော အရာကိုဆိုလိုသည်ကို ယခင်နည်းအတိုင်း “ဟူသော” နှင့် “အ” တို့ကိုချေ၍ ရှေ့ပုဒ် “မြောက်” တွင် က်- အဃောသ အက္ခရာဆုံးလေသောကြောင့် နောက်ပုဒ်က အစ ဗျည်းကို အသံမပြောင်းစေပဲ “မြောက်ဖက်” ဟု ရွတ်ဆိုသည်။
ဟူရာ၌ တောင်ဟူသော အဖက်ဟု ဆိုလိုသည်ကို ရှေ့ပုဒ်ကာရန် -င်ဗည်းသည် ဃောသအက္ခရာဖြစ်လေသောကြောင့် နောက်ပုဒ်၏ အစဗျည်းသည် အသံပြောင်းသွား၍ “တောင်ဘက်” ဟု ရွတ်ဆိုလေသည်။
မြန်မာဘာသာ၌ က-ခ၊ စ-ဆ၊ တ-ထ၊ ပ-ဖ၊ သ ဟုသော အဃောသအက္ခရာ ၉ လုံးသာ အသံပြောင်းတုံ၊ မပြောင်းတုံရှိသည်။ က်-စ် တ်-ပ် တို့ နောင် နောက်ပုဒ်အသံမပြောင်း၊ ရှေ့ဆက် အ- သဒ္ဒါတို့ နောင်လည်း နောက်ပုဒ် အသံမပြောင်း၊ ကြွင်းသောဗျည်းသရတို့နောင် နောက်ပုဒ်၏ အသံ ပြောင်းရသည်။ ဤသို့ အကြမ်းအားဖြင့် အသံပြောင်းနည်းကို မှတ်ရာသည်။
သန္ဓိစပ်ဟူသော အကြောင်းကြောင့် ရွတ်ဆိုသံပြောင်းသော်လည်း ရေးမှတ်ရာ၌ကား စာရေးအမှန်၊ စာဖတ်အသံဟူသော ဥပဒေအရ
ပြောဗာ၊ ဆိုဗာ၊ လိုက်ပါ ဟူသော အသံတို့ကို ပြောပါ၊ ဆိုပါ၊ လိုက်ပါဟု အက္ခရာမပြောင်းပဲ အရေးများသည်။ ထိုသို့ အက္ခရာမပြောင်းပဲ ရေးထားသော်လည်း ၂ ပုဒ်ကို တွဲစပ်၍ ရွတ်ဆိုသောအခါ နှုတ်ကပင် သုခုစ္စာရနသဘောသို့လိုက်၍ ပြောဗာ၊ ဆိုဗာ၊ လိုက်ပါဟု ရွတ်ဆိုမိတော့သည်။ ထို့ကြောင့် သန္ဓိစပ်ပုဒ်တို့ကို အသံပြောင်းသော်လည်း အက္ခရာကို မပြောင်းမလဲပဲ ရေးမှတ်သည်သာ များသည်။ ထိုသို့ အက္ခရာကိုမပြောင်းစေပဲ ရေးမှတ်ခြင်းသည် အနက်ထင်လွယ်သောအကျိုး ရှိ၏။
ထို့ကြောင့် ပြောပါ၊ ဆိုပါ၊ လိုက်ပါ ဟူသော အက္ခရာမပြောင်းပဲရေးသော အရေးအမှတ်ကို မှန်သည်၊ သင့်မြတ်သည်ဟု ဆိုရလျှင် စားဖွယ်၊ သောက်ဖွယ်၊ ဆိုဖွယ်စသော အရေးမျိုးကိုလည်းကောင်း၊ ရိုက်ဖိသည်၊ ဆိုဖိသည်၊ ပြောဖိသည်စသော အရေးမျိုးကိုလည်းကောင်း၊ မဟုတ်ဖူး၊ မသွားဖူး၊ မစားဖူးစသော အရေးမျိုးကိုလည်းကောင်း၊ မြောက်ဖက်၊ တောင်ဖက်၊ အနောက်ဖက်၊ အရှေ့ဖက်စသော အရေးမျိုးကိုလည်းကောင်း အရေးမှားဟု မဆိုသင့်ပေ။ “စာရေးအမှန်” ဟူသော ဥပဒေအတိုင်း ရေးပေသည်။ လူပိန်း၊ လူပြိန်းတို့ ဖတ်တတ်စေခြင်းငှာ ရွတ်ဆိုသံနှင့်အညီ အက္ခရာကိုပြောင်း၍
စားဘွယ်၊ သောက်ဖွယ်၊ ဆိုဘွယ် ဟူ၍လည်းကောင်း၊
ရိုက်ဖိသို့၊ ဆိုဘိသို့၊ ပြောဘိသို့ ဟူ၍လည်းကောင်း၊
မဟုတ်ဖူး၊ မသွားဘူး၊ မစားဘူး ဟူ၍လည်းကောင်း၊
မြောက်ဖက်၊ တောင်ဘက်၊ အနောက်ဖက်၊ အရှေ့ဘက်ဟူ၍လည်းကောင်း ရေးမှတ်သော် အသံစွဲရေးနည်းနှင့် ညီသောကြောင့် အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိ။ ရှေးရှေးနှောင်းနှောင်း ပညာရှိအများပင် ဤသို့ ရေးမှတ်ကြကုန်သည်။ ဖဦးထုပ်သံ ရွတ်ဆိုသော
သောက်ဖွယ်၊ ရိုက်ဖိသို့၊ မဟုတ်ဖူး၊ မြောက်ဖက် စသည်မျိုးကို သောက်ဘွယ်၊ ရိုက်ဘိသို့၊ မဟုတ်ဘူး၊ မြောက်ဘက်ဟု ရေးမှတ်ခြင်းသည် အနက်စွဲရေးနည်းလည်း မဟုတ်၊ အသံစွဲရေးနည်းလည်း မဟုတ်၊ သောက်ဘွယ်ကို သောက်ဖွယ်ဟု ဖတ်စေခြင်းကို ဃောသအက္ခရာသံကို ဖျက်ဆီးသည် မည်၏။
ဖတ်စေခြင်းသည်လည်း အက္ခရာသံကို ဖျက်ဆီးသည် မမည်ပါလော ဟူငြားအံ့၊ အသံစွဲရေးနည်းဖြစ်သော “စာရေးအမှန်၊ စာဖတ်အသံ” ဟူသော ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ပေသောကြောင့် ထိုသို့ ဖတ်ခွင့်ရပြီးဖြစ်၍ အဃောသအက္ခရာကို သန္ဓိစပ်နည်းနှင့်အညီ ဃောသအက္ခရာသံသို့ ပြောင်း၍ ဖတ်ခြင်းသည် အက္ခရာသံကို ဖျက်ဆီးသည် မမည်ပါ။ အကယ်၍ သန္ဓိမစပ်ပဲ
ဖဦးထုပ်သံ ရွတ်ဆိုလျှင်လည်း အနက် ထင်သာသောကြောင့် သန္ဓိမစပ်ပဲလည်း ပြောဆိုခွင့်ရသည်။ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်သော ရခိုင်သား၊ ထားဝယ်သားတို့သည် သန္ဓိမစပ်ပဲ အပြောများသည်။
ထိုသို့ “စာရေးအမှန်” ဟူသော ဥပဒေရှိသော်လည်း လူပြိန်းအကျိုးငှာ စားဘွယ်၊ မသွားဘူး စသည်ဖြင့် ပြောသံနှင့်အညီ အက္ခရာပြောင်းလဲ၍ ရေးမှတ်သကဲ့သို့ နာမ်အနက်၊ ဒြပ်အနက်ထင်စေရန် ကြိယာသံကို ပြောင်းလဲ၍ရွတ်ဆိုရာ၌လည်း သန္ဓိစပ် မဟုတ်သောကြောင့် ပြောသံနှင့်အညီ အရာရာကိုပြောင်းလဲ၍ ရေးသင့်သည်။
ဟူသောအရေးကို လူပြိန်းကိုထားဦး၊ မပြိန်းသောသူပင် ဘိတခုယူခဲ့ပါဟု ဆိုလိုကြောင်း သိခက်သည်။ စေခိုင်းသူ အလိုရှိသောအရာကို တစုံတခုနှင့် ဖိ၍ယူခဲ့ရန် ခိုင်းသည်ဟု အနက်ကောက်မှားတတ်သည်။ ထို့ကြောင့်
ကွမ်းဝါ၊ ပိုင်းငင်၊ ဆီးသီး၊ ဆေးသည်၊ ဖိတခု၊ ဖွဲ့ဖြူ၊ ပုံတီး၊ ပြောတီး၊ ပေါင်းတော်၊ တိုင်တော်ကြီး စသော ရှေးရှေးအရေးကို နှောင်းအလတ် ပညာရှိတို့သည် ဂွမ်းဝါ၊ ဗိုင်းငင်၊ ဇီးသီး၊ ဈေးသည်၊ ဘိတခု၊ ဘွဲ့ဖြူ၊ ဗုံတီး၊ ဗြောတီး၊ ဗောင်းတော်၊ ဒိုင်တော်ကြီး
ဒုတ်တချောင်း၊ ဓားတလက်၊ ဒို့ဗမာ၊ ဇုံတွဲ၊ ဇွတ်လုပ်၊ ဇွဲသန်၊ ဃောင်းဆယ်လုံး၊ ဃောင်ညွန့်ချိုး၊ ဂိုင်းညွတ်၊ ဂေါက်တခု၊ ဂွေ့ထဲမှာ၊ ဗောက်ပြော၊ ဗောင်ကျိုး၊ ဗလာစသော ခုကာလအရေးမျိုးကို အပြစ်တင်ဖွယ်မရှိပေ။
မြန်မာဘာသာ၌လည်း အက္ခရာ ပြောင်းနည်း၊ အသံပြောင်းနည်းရှိကြောင်း ပြရန် မှတ်ချက်သွင်းလိုက်ရာ “ဆိုစဖားရား၊ ထားပချေမိ ငါ့ဝန်ရှိခဲ့” ဟူသော ပညာရှိစကားကို လိုက်နာ၍ မြန်မာဘာသာ၌ အသံပြောင်းခြင်း အကြောင်းများတွင် ၂ ပါးကို သိသာရုံ ပြလိုက်ပါသည်။
(ဘာသာဆောင်းပါးများစာအုပ်၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ်ပို့ချစာစဉ် ၁၀၅၊ ၁၉၈၇ ဇန္နဝါရီလ ဒုတိယအကြိမ် ပုံနှိပ်ခြင်း။ စာ ၉ မှ ၂၁)
Author lettwebawPosted on 19 February 2019 19 February 2019 Categories Burmese usages, ReproductionLeaveacomment on ရှေးဆရာရဲ့ ရှေးစာ… မှတ်သားစရာ